Nagarik Shukrabar - यीनकाे के गल्ती : एसिडले आत्मबल नगलाएकाहरुको कथा
मङ्गलबार, ०१ असार २०७८, ०७ : ०१
सोमबार, १३ जेठ २०७६, ०८ : ५१ | प्रजु पन्त
२०७६, जेठ १, साँझ ९ बजे
काठमाडौंको वसन्तपुर कटेर केही पर गएपछि आउने सानो गल्लीको कोठामा थिइन् संगीता मगर । बेलुकातिर मोबाइल चलाउँदै थिइन् । फेसबुकमा सेयर भएको एउटा समाचारको हेडलाइनले उनको ध्यान तान्यो, ‘कालोपुलमा युवतीमाथि एसिड प्रहार ।’
हत्तपत्त लिंकमा क्लिक गरिन् ।
‘आफ्नी बहिनीसँग हिँडिरहेको बेला कालोपुलमा २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि एसिड प्रहार भएको छ । एसिड हानेको आरोपमा उनका श्रीमान् विष्णु भुजेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।’
१६ वर्षकी थिइन्, जेनी जुन बेला विष्णुलाई जीवन साथी बनाइन् । कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै उनी विष्णुको माया पग्लिइन् । त्यसपछि आमा र बहिनी छाडेर विष्णुको साथ लागिन् ।
काठमाडौंमै डेरामा बस्थे दुवै । विष्णु मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गर्थे । विष्णुले माया देखाउन आफ्नो छातीमा उनकै तस्बिरको ट्याटु बनाएका थिए । फिल्मी प्रेमझैँ भए पनि यो दृश्यले जेनीको मन पगालेको थियो ।
विवाह गरे पनि विष्णुको परिवारसँग उनको भेटघाट भइसकेको थिएन । उनको परिवार बनेपाको नबोबुद्धमा बस्थे । विष्णुले उनलाई बनेपाको साटो ओखलढुंगा लिएर गए । विवाहपछिको एक वर्ष दुवै उतै बसे ।
खै के मुड चल्यो सन्तान जन्मिएपछि विष्णुले उनलाई बनेपाको घर लगे । आफ्नो कर्मघर पुग्न पाउँदा जेनी खुसी थिइन् । यसपछि विष्णुले बनेपाको मोटरसाइकल वर्कसपमा काम थाले ।
अकस्मात जेनीको मन नराम्ररी भाँच्चियो, उनलाई विष्णुले धोका दिएका रहेछन् । पहिलो माया भनेर फकाएर कलिलैमा विवाह गरे तर उनी माया मात्रै हैन, श्रीमती नै दोस्री रहिछन् ।
विष्णुले माया त गर्थे तर माया भन्दा धोकाको चोट गहिरो भएपछि उनी सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिन् । त्यसपछि २०७५ कात्तिकमा काभ्रेको बनेपाबाट माइती आइन् ।
माइतमा उनका बाबु थिएनन् । तीन छोरी र पत्नी छाडेर दुई वर्षअघि नै उनका बुबा परलोक पुगिसकेका थिए । माइतीमा सानो होटल थियो । बाबुको मृत्युपछि होटल पनि बन्द भयो । घर चलाउन आमाले घरेलु काम शुरु गरिन् । विष्णुको मायामा फँस्दा छुटेको पढाइ अगाडि बढाउन जेनीले प्राइभेट एसइईको तयारी थालिन् ।
सानो छोरा उनकै साथमा थियो । छोराको मायाले विष्णुलाई तानिरहन्थ्यो र फोन गर्न छाडेका थिएनन् । उनले माफी माग्दै जेनीलाई सँगै बस्न फकाइरहन्थे । धोका पाएको जेनीको मन फर्किएन । उनी पढाइलाई सर्वश्व ठान्दै त्यतै केन्द्रित भइन् ।
घटनाको दिन जेनी बहिनीसँग कोठामा थिइन् । साँझ सात बजे विष्णुको फोन आयो । जेनीकी आमा कोठामा थिइनन् । उनी सुत्केरी महिलालाई मालिस गर्न काममा गएकी थिइन् ।
विष्णुले आफू काठमाडौं आएको छु, एक पटक भेटौँ न भने । प्रायः फोनमा झगडा भइरहन्थ्यो । त्यसैले जेनी विष्णुलाई भेट्न मन गर्दिन थिइन् । त्यो दिन खै के भयो उनी भेट्न राजी भइन् । कोठाबाट एक्लै निस्किइन्, धोबीखोला किनारतिर लागिन् । विष्णु नजिक पुगेलगत्तै उनले गोजीबाट बोतल निकालेर जेनीलाई छ्यापे र भागे । सहनै नसक्ने गरी पोल्न थालेपछि उनी चिच्याउन थालिन् । वरिपरिकाले उनलाई ट्याक्सीमा राखेर ओम अस्पताल पुर्याए । अस्पताल पुगेपछि उनलाई विष्णुले दोस्रो पटक धोका दिएर एसिड हानेको खुल्यो ।
ओम अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई कीर्तिपुर बर्न अस्पताल लगियो । डाक्टर अपार लामिछानेका अनुसार जेनीको १२ प्रतिशत शरीरको भाग जलेको छ ।
जेनीको समाचार पढ्दापढ्दै संगीता टोलाइन् । उनको दिमागमा पाँच वर्षअघिको दृश्य फनफनी घुम्यो ।
२०७१ फागुन १० । संगीता मगर पनि जेनीझैँ एसएलसीको तयारीमा थिइन् । वसन्तपुर नजिकैको शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्दै थिइन् उनी । घर नजिकैको ट्युसन सेन्टरमा पढ्थिन् । कक्षा कोठामा साथी सीमा बस्नेत र उनी भएर पढिरेहका थिए । अकस्मात् ढोकाबाट कोही आयो र संगीतालाई केही छ्यापेर भाग्यो । सीमा बस्नेतलाई पनि पोल्यो ।
पोलेर चिच्याउन थालेपछि ट्युसन सेन्टरका साथीहरुले दुवैलाई वीर अस्पताल पुर्याए । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज लगियो । संगीताको अनुहार, घाँटी र हातमा एसिड परेको थियो । अवस्था निकै गम्भीर थियो । सीमालाई भने त्यत्ति असर पारेन ।
एसिड हान्नेलाई कसैले देखेका थिएनन् । दुश्मन कोही थिएनन् । प्रायः यस्ता आपराधिक घटनाको मूल कारण प्रेम देखिने गरेकाले प्रहरीको अनुसन्धान त्यहीँबाट शुरु भयो । संगीताका कुनै प्रेमी थिएनन् ।
करिब एक महिनाको अनुसन्धानपछि संगीतालाई एसिड हानेको आरोपमा जीवन विक पक्राउ परे । आफूलाई एसिड हान्ने व्यक्ति पक्राउ परेको खबरसँगै नाम सुन्दा उनी छक्क परिन् । उनी परिचित मात्रै हैन, एकै घरमा बस्थे ।
शुक्रवारकर्मी जेठ २ गते बेलुका कीर्तिपुर अस्पतालमा पुग्दा जेनी बर्न वार्डमा थिइन् । छाती, बायाँ गाला र घाँटीमा एसिडले असर पारेकाले उनीसँग कुरा गर्न सम्भव थिएन ।
साढे ७ बजेतिर एक महिला र पुरुष आइपुगे अस्पतालमा । महिला जेनीको आमा कमला खड्का थिइन् । साथमा रहेका काका भगवान खड्का । कमला बोल्न तयारै भइनन् । काका भगवान्ले घटना भन्नुपर्छ भनेपछि बल्ल राजी भएकी थिइन् ।
‘ओखलढुंगामा बस्दा उसले छोरीलाई कुट्दो रहेछ,’ कमलाले भनिन्, ‘घरमा अर्कै श्रीमती भए पनि छलेर विवाह गर्यो । अहिले आएर यस्तो गर्यो !’
उनी निक्कै निराश थिइन् ।
‘माया भएको मान्छेले पनि यस्तो गर्न सक्छ र ?’
दोस्रो दिन जेनीको अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर अस्पताल पुग्दा त्यहीँ भेटिइन्, संगीता । उनी जेनीलाई भेट्न आएकी थिइन् । अघिल्लो पटक यस्तै एसिड आक्रमणमा ज्यान जोगिएपछि आफूजस्तै पीडितको सहयोगमा उनी जुट्ने गरेकी छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई गच्छेअनुसार सहयोग पनि खोजिदिन्छिन् । एसिड आक्रमणमा परेकालाई आफ्नै कथा र हिम्मत सुनाएर मनोबल बढाउने प्रयास गर्छिन् ।
‘वीर र केएमसी अस्पतालमा ५ महिना अस्पतालमा नै बसेँ,’ संगीताले पुराना दिन सम्झँदै भनिन्, ‘शरीरको घाउ अलिक निको हुन त ४÷५ महिना लाग्यो । मनको घाउ निको हुन भने तीन वर्ष लाग्यो ।’
उनको मुहार मलिन भयो । उनी मौन भइन् ।
संगीताको दायाँ आँखाबाट आँसु बगरिहेको थियो । पीडाले होइन, त्यो भागमा एसिड परेकाले आँसु बगिरहने उनले बताइन् र नजिकैको टिस्यु पेपर निकालेर पुछिन् ।
केहीबेरको मौनतापछि शुक्रवारकर्मीको ‘कसरी निको हुनुभयो त ?’ भन्ने जिज्ञासामा संगीताले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘म भर्खर मात्र बाहिर निस्कन थालेकी हुँ । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि बाहिर के भएको छ भन्ने मतलब लाग्दैनथ्यो । एकोहोरो घरमा बसिरहेकी हुन्थेँ । बाहिर जाने आँटै आउँदैनथ्यो ।’
एसिडले अनुहारको अधिकांश भागमा असर पारेको थियो । बाहिर जाँदा कसले के भन्ला भन्ने संकोचले संगीता लामो समय घरबाट निस्कन सकिनन् । सबैभन्दा पीडा त आफ्नै अनुहार हेर्दा हुन्थ्यो । त्यसमाथि अरुले पुराना कुरा कोट्याइरहन्थे । संगीता खप्न सक्दिन थिइन् । त्यसैले लामो समय आफूलाई कोठामै बन्धक बनाइन् । कहीँकतै हिँड्नै परे अनुहार सलले छोपेर मात्र हिँड्थिन् ।
‘मलाई जस्तो कसैलाई नहोस् भन्ने लाग्छ तर दिनहुँ यस्ता घटना घटेका छन्,’ संगीता खिन्न मान्दै भनिन्, ‘कडा कानुन नभए अपराधी झनै बढ्छन् । हाम्रो देशको कानुन किन यति फितलो होला !’
महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका प्रमुख डिएसपी रवीन्द्रनाथ पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेअनुसार सँगै बस्न गरेको आग्रह नमानेको झोँकमा जेनीलाई उनका श्रीमान्ले एसिड हानेको देखिएको छ ।
‘जति बोलाए पनि घर नआएपछि त्यही झोँकमा बनेपाको एक सुनचाँदी पसलबाट एसिड किनेर काठमाडौँ आएर खन्याइदिएको पाइयो,’ डिएसपी पौडेलले भने । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जेनी अस्पतालको बेडमा छिन् । ३ वर्षीय छोरा अलपत्र परेपछि पुतली घरमा लगेर राखिएको छ । परिवारका सदस्य अस्पताल आइरहन्छन् ।
सँगै संगीता पनि प्रायः अस्पताल पुगिरहन्छिन् । धन्य संगीताकोझैँ जेनीको अनुहारमा एसिडको धेरै प्रभाव परेको छैन । चिकित्सकका अनुसार एसिडबाट जेनीको १२ प्रतिशत भाग जलेको छ । उनको छाती र घाँटीमा धेरै प्रभाव परेकाले चिकित्सक अहिले उनीबारे यकिनसाथ भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् ।
‘अवस्था यही छ भन्न सकिन्न,’ डाक्टर लामिछानेले भने, ‘अहिलेको अवस्था स्टेबल र क्रिटिकल नै हो ।’
‘तीन वर्ष कोठाको बास’
शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत थिएँ । एसइईका कारण पढाइको निकै चाप थियो । हामी साथीहरुसँग भेट्दा पनि पढाइबाहेक अरु कुरा हुँदैनथ्यो । २०७१ फागुन १० मा सधैँझैँ बिहानै उठेँ । हतारमा किताब मिलाएर ट्युसन पढ्न साढे पाँच बजे निस्किएँ ।
सीमा बस्नेत र म एकदमै मिल्ने साथी थियौँ । हामी हिसाब गरेर बसिरहेका थियौँ । अकस्मात् कोही ढोकाबाट आयो र मलाई नै टार्गेट गरेर अनुहारमा पर्ने गरी झोल पदार्थ फाल्यो । के फाल्यो मलाई थाहा भएन तर भतभती पोल्न थाल्यो । सीमालाई पनि लाग्यो । केही बेरपछि हामीलाई वीर अस्पताल लगियो । उपचारका क्रममा बाहिर हाम्रा बारेमा के समाचार आइरहेको छ भन्ने थाहा थिएन । प्रेम सम्बन्धका कारण एसिड हानेको समाचार आएछ । हुँदै नभएको कुरा आउँदा साहै्र नरमाइलो लाग्यो ।
मेरो शरीर त एसिडले गर्दा पोलेकै थियो, बाहिरको अफवाहले मन पनि पोल्यो । हामीलाई एसिड हान्ने जीवन बिकले सुरुमा बयान दिँदा घरायसी झगडा भनेका थिए । पछि उनले हुँदै नभएको प्रेम सम्बन्ध रहेको बताएछन् । पछि उनको जात थाहा पाएपछि मैले छोडेको भनेर गलत बयान दिए । मिडियाले पनि त्यही कुरा लेखे । मलाई एसिड प्रहार गरेर अपराध गरेको कसुर छोप्न उसले जातको कुरा ल्याएर सेन्टिमेन्ट पाउन खोज्यो ।
मैले भन्नै पर्छ । जति पनि हामी केटीहरुमाथि अपराध भएका छन्, त्यो अपराध लुकाउन हुँदै नभएको प्रेमको नाटक रचिन्छ । घटनालाई अतिरञ्जित बनाइन्छ । केटीलाई नै गलत बनाउने प्रयास गरिन्छ । यस्तो अन्याय कहिलेसम्म ?
( आफुले करातेमा पाएको मेडल हेर्दै संगीता मगर । तस्बिर: कृष्पा श्रेष्ठ )
हाम्रो र त्यो केटाको डेरा एउटै घरमा थियो । एउटै बाथरुम प्रयोग गथ्र्यौं । त्यतिबेला जीवन बाथरुम गएको रहेछ । भाइले थाहा नपाएर ढोका ढक्ढकाएछ । त्यही निहुँले ठूलै झगडा प¥यो । त्यो झगडाले हामी बसेको घरमा मात्र सीमित भएन, टोल भरिका मान्छे जम्मा भए । सबैले उसैको गल्ती भएको बताएपछि त्यतिबेला त ऊ रिसले चुर भएको थियो । भाइलाई र मलाई त्यसले नराम्रो नजरले हेथ्र्यो । झगडा भएको एक वर्ष भइसकेको थियो । उसले त्यही रिसइबी साँधेको हो । मलाई आक्रमण नगरेको भए उसले भाइलाई आक्रमण गथ्र्यो ।
वीर अस्पताल र केएमसीमा म ५ महिना बसेँ । अस्पतालका कहालीलाग्दा दिन म सम्झन समेत चाहन्नँ । औषधीले घाउ त निको हुँदै गयो तर मेरो मनको घाउ निको हुन भने धेरै समय लाग्यो । मलाई बाबा, मामु, भाइ, दिदीले धेरै सहयोग गर्नुभयो । मेरो आत्मविश्वास बढाउन सीमाले गरेको मिहिनेत कसरी भुलौँ ? सीमा तिमी मेरै साथी भएको कारण मेरै छेउमा भएको कारण तिमी पनि पीडित भयौँ तर उपचारपछि जुन तरिकाले तिमीले मेरो मनोबल बढाउन कोसिस ग¥यौ, त्यो कसरी म भुल्न सक्छु र ?
सबैको साथ र सहयोगले म तङ्ग्रिदै त गएँ तर तीन वर्षसम्म बाहिर निस्कन धक लाग्यो । अनुहार त झनै देखाउँदिन थिएँ । अरुले पुरानो घाउ कोट्याउँदा मन चरक्क हुन्थ्यो । कसैले सहानुभूति देखाउँदा पनि चित्त दुख्ने रहेछ । अरुलाई जस्तै सामान्य व्यवहार भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने रहेछ ।
केही समयअघिसम्म म खुल्लै हिँड्दिनथे । डर लाग्थ्यो । अरुले आफ्नो फेस हेरेर गर्ने रियाक्सनले झनै बढी पीडा दिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ निस्कन परे पनि अनुहार पूरै कभर गरेर निस्कन्थेँ । हिजोआज दिउँसो बाहिर हिँड्दा डर लाग्दैन । अरुले मेरो अनुहारबारे के भन्छन् ? के सोच्छन् भन्ने कुरा सोच्न पनि छाडिसकेँ ।
( संगीता मगर । तस्बिर: कृष्पा श्रेष्ठ )
म पढ्न जान्ने थिएँ । स्कुलमा मेरो पोजिसन राम्रै आउँथ्यो । छात्रवृत्तिमा नाम निस्कियो भने डाक्टर पढ्ने, नभए कराँतेको खेलाडी बन्ने सपना थियो । कक्षा ९ सम्म पढ्दा नियमित कराँते खेल्थेँ । कराँतेको ब्ल्याक लेभलको वन डनसम्म भएँ ।
मलाई कराँते सिकाउने गुरुले तिम्रो सम्भावना खेलमा पनि छ भन्नुहुन्थ्यो । मैले विद्यालयमा हुने कार्यक्रमहरुमा सिल्भर मेडलदेखि गोल्ड मेडलसम्म जितेकी थिएँ । वर्षैपिच्छे फरक डिजाइनको मेडलहरु पाउँदा कम्ती रमाइलो लाग्थेन !
नोबेल कलेजमा कक्षा ११ र १२ मा पढेँ । कलेजले फुल स्कलरसिप दियो । अब ब्याचलरमा बिएसडब्लु पढ्ने सोच बनाएकी छु ।
मलाई जस्तो कसैलाई नहोस् भन्ने लाग्छ तर दिनहुँ यस्ता घटना घटेका छन् । कडा कानुन नबनाइए अपराधी अझ बढ्छन् । हाम्रो देशमा किन कानुन यति फितलो भएको होला भन्ने प्रश्नले मलाई सताइरहन्छ ।
जेलबाट जीवन छुट्ने बेला भएको छ । कहिलेकाहीँ डर लाग्छ । घरायसी झगडा पर्दा त एक वर्ष प्लान बनाएर एसिड हान्नेले जेल बस्दा झनै के–के सोचेको होला ?
खै किन हो, मलाई सानैबाट बाबाले धेरै माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो । उहाँले मलाई कहिल्यै कराउनुभएन । हिजोआज बुबाको अनुहार हेर्छु, उहाँले मेराबारे ठूलो सपना देख्नुभएको थियो । घरकी जेठी छोरी काममा केही सहयोग गर्ने बेलामा उहाँले नै उपचार गरिरहनुपरेको छ । त्यसो हुँदा मनमा चसक्क लाग्छ । अझै पनि हिम्मत हारेकी छैन । केही न केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छँदैछ ।
‘मलाई किन यो सजाय’
(वसन्ती । तस्बिर : काठमाडाैंप्रेसडटकम)
गत असोज ८ गते श्रीमान् यम परियार र छोराछोरीको साथ बसिरहेका थियौँ । साँझ परेपछि म बजार निस्कन खोजेँ । मेरी आमा हटियामा बस्नु हुन्थ्यो । त्यहाँ पसलमा सघाएर बेलुकी फर्कदा सागको बेर्ना लिएर फर्कने सोच बनाएकी थिएँ । श्रीमान्लाई साग सार्ने ठाउँ ठीक पारेर राख्नु भन्दै म बजार निस्किएँ ।
त्यस्तै साढे ६ बजेको थियो । पछाडिबाट कोही आयो । विमल श्रीपाइलीले एक्कासि पेटमा छुरी र टाउकोबाट केही कुरा खन्याइदियो । मलाई यति नमज्जाले पोल्यो कि बेस्सरी चिच्चाएछु । सबै मिलेर अस्पताल मलाई लगे । मेरो अनुहार, शरीरका भाग एसिडले गर्दा जले ।
मैले यत्रो सजाय पाउनुको पछाडि प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु थियो । १४ वर्षको छोरा र ८ वर्षकी छोरीकी आमालाई के सुरले त्यो मान्छेले प्रेम प्रस्ताव ग¥यो ? कसैले प्रेम प्रस्ताव गर्दा नै मानिहाल्नुपर्ने हामीले ?
अस्पतालको शै्ययामा छट्पटाउँदै गर्दा मैले मेरा सन्तानलाई सम्झिएँ, लाग्यो– यिनका लागि भए पनि बाँच्नु पर्छ । मेरै कारणले श्रीमान्ले पनि दुःख पाउनुभयो । काठमाडौँमा डेरा खोज्दाको सास्ती, उपचार खर्च जुटाउन भएको तनावलाई त म सम्झन पनि चाहन्नँ । ढाडस दिने संगीता बहिनी नभएकी भए के हुन्थ्यो होला !
मेरो उपचार टिचिङ अस्पतालमा अझै पनि भइरहेको छ । मेरो अनुहार कति विरुप भएको छ भने छोराछोरी नडराऊन् भनेर टाउकैदेखि छोपिने गरी मास्क लगाउने गरेकी छु । छुराले ठूलो आन्द्रा र फोक्सोमा पनि असर पारेको छ । एसिडका कारण आँखाको नानीमा समस्या देखिएपछि खर्च जुटाउन मेरो श्रीमान् यम र म नवलपरासी आएका छौँ ।
एसिड प्रहारका घटना दिन प्रतिदिन बढेका छन् । कालोपुलमा फेरि आक्रमण भएछ । यो पीडा बिरामीलाई नै थाहा हुन्छ । कडा कानुन ल्याइए घटना कम हुन्थ्यो कि !
किन हुन्छ एसिड आक्रमण ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा एसिडपीडित महिला १२ जना र पीडित पुरुष ३ जना छन् । सबैभन्दा धेरै घटना प्रदेश नम्बर २ मा हुने गरेको देखिन्छ ।
एसिड प्रहारको कारण आर्थिक कारोबारमा विवाद हुँदा, जग्गामा विवाद हुँदा, प्रेम गरेकोले विवाह गर्न नमान्दा, यौन सम्बन्ध देखिन्छ । घरायसी झगडा, आफँै एसिड खानेदेखि सुतिरहेका किशोरी छोरीलाई एसिड प्रहार गरेको समेत घटना छन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा झापाकी ३७ वर्षीय कविता मगर र सुनसरीकी ५३ वर्षीय सीता शर्माले आफँै एसिड खाएर मृत्यु भएको थियो । कारणमा घरयासी झगडा देखिएको थियो ।
२ नम्बर प्रदेशमा आफ्नै परिवारबाट घटना घटाइएको धेरै देखिन्छ । २०७२ वैशाख २२ मा जग्गा विवादमा गौरीशंकर साह र अजय साहले ५५ वर्षीय सत्यनारायण साहलाई शरीरभरि एसिड खन्याइदिएका थिए ।
२ नम्बर प्रदेशमै २०७४ असोज २१ मा २० वर्षीया अनीताकुमारी महतोलाई एसिड प्रहार भएको थियो ।
गत वर्ष भदौ २७ मा रौतहटमा आफ्नै छिमेकीले सुतिरहेका छोरीहरुमाथि एसिड प्रहार गरे । जेठी सम्झना कुमारीको ज्यानै गयो भने अर्की छोरी बाँच्न सफल भइन् । पीडक रामबाबु पासवानले एसिड हान्नुको कारण छोरीको प्रेम सम्बन्ध टुटाउने देखिएको थियो ।
चितवनमा २०७५ वैशाख ९ मा आर्थिक कारोबारमा विवादमा ५० वर्षीय रामचन्द्र खनियाँले २९ वर्षकी कल्पना श्रेष्ठलाई एसिड प्रहार गरेका थिए । चितवनमा २०७५ बैशाख २४ मा ३४ वर्षीय वीरमान महर्जनलाई ३० वर्षीय सुजीतकुमार विश्वकर्माले एसिड प्रहार गरे ।
दाङमा किराना पसलमा बसिरहेकी ३२ वर्षीय रीता चौधरीलाई २२ वर्षे सुनील चौधरी, २० वर्षीय विनु चौधरी र ३६ वर्षीय विशाल मिश्र मिलेर एसिड प्रहार गरेका थिए । घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन ।
धादिङका २८ वर्षे सुनील कोइरालाले रुपन्देही बस्ने तुल्सा सापकोटालाई एसिड प्रहार गरे । कारण आफूलाई छोडेर अर्कैसँग विवाह गर्न लागेको देखियो । सुर्खेतमा २०७३ असार २१ मा पूर्णिका सार्कीमाथि एसिड प्रहार भयो । उनलाई आफ्नै श्रीमान्ले एसिड हानेका थिए ।
घटनाको प्रकृति केलाउँदा प्रेम सम्बन्ध, यौन प्रस्ताव अस्वीकार, आर्थिक लेनदेनको कारण देखिएको छ भने निशानामा महिला नै पर्ने गरेका छन् । एसिड प्रहार गर्नु केहीको ज्यानै लिने उद्देश्य भए पनि धेरैको उदेश्य कुरुप बनाउने देखिन्छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका डिएसपी रवीन्द्रनाथ पौडेलले प्रेमको निहुँमा हिंसा बढी हुने गरेको बताए ।
‘२० वर्षभन्दा मुनिका किशोरी÷युवतीमाथि आक्रमण हुने गरेको छ,’ डिएसपी पौडेलले भने, ‘एकोहोरो प्रेम, सुरुमा दोहोरो प्रेम भए पनि पछि झगडा हुँदा एसिड आक्रमण हुने गरेको छ ।’
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबीन्द्र बोगटी एसिड आक्रमण धेरै महिलामाथि हुने गरेको देखिएको बताउँछन् । युवतीहरुलाई युवकहरुले एकपक्षीय हिसाबले मन पराउने र केटीहरुले रिजेक्ट गरेको बहाना बनाएर आवेगमा आएर एसिड प्रहार भएको देखिएको उनले बताए । उनीहरुको उद्देश्य आफूले भनेको नमानेपछि मार्नेभन्दा पनि अनुहार नै ड्यामेज गर्ने मनसायले नै आक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए ।
‘एसिडको घाउ खतरनाक हुन्छ’
डा. अपार लामिछाने ,कीर्तिपुर बर्न अस्पताल
एसिडको काम जलाउने हो । यो केमिकल भएकोले आगोले पोलेको, तातोपानीले पोलेको, करेन्ट लागेर शरीर अंगभंग भएको घाउभन्दा खतरानाक हुन्छ । एसिड परेपछि हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग छाला हुँदै भित्रैसम्म असर पार्छ । प्रोटिन नाश गर्छ भने रक्त सञ्चारमा पनि अवरोध पैदा गर्छ । पोलेको भागमा रगत पुग्दैन ।
एसिड मात्रै हैन शरीरको जुनसुकै अंग पनि जल्दा लगातार पानी खन्याइरहनु पर्छ । पानीको तापक्रम २० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनु हुँदैन । अरु कारणले जलेको छ भने आधा घण्टासम्म लगातार पानी खन्याउनुपर्छ भने एसिडको बिरामीले एक घण्टासम्म पानी खन्याउनु पर्छ । चिसो पानीमा डुबाउने, आइस लगाउने काम झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन । जल्नेबित्तिकै अस्पताल लगिहाल्ने भन्दा पनि प्राथमिक उपचार गरेर अस्पताल लैजाँदा बिरामीलाई सजिलो हुन्छ ।
अस्पताल आएपछि उनीहरुलाई नदुख्ने औषधी र पानीको मात्रा मिलाएर दिइएको हुन्छ । एक हप्तासम्म उनीहरुको अवस्था चुनौतीपूर्ण र स्थिर हुन्छ । एसिडले मरेको शरीरको भाग काटेर फालिन्छ । अप्रेसनपछि उनीहरु खान सक्ने, बोल्न सक्ने भइरहेको हुन्छ तर शरीरको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्न सकिदैन । बाहिरबाट हेर्दा बिरामी सामान्य नै देखिन्छ । शरीरमा मात्रै एसिड परेको हो भने सञ्चो हुने सम्भावना भए पनि मुखभित्र परेको छ भने श्वास नली खुम्चिने र सानो बनाउने हुँदा खतरामुक्त रहँदैनन् ।
एसिडले जलेको अंग पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । आफ्नै शरीरको र कृत्रिम छाला राख्न सकिन्छ । २० प्रतिशत मात्र भाग जलेको छ भने बिरामीकै शरीरको भाग काटेर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा बढी भएको खण्डमा भने बाहिरी सहयोग लिनुपर्छ ।
शरिरको एक प्रतिशत भाग जले पनि सञ्चो हुन समय लाग्छ । उनीहरुको शरीरको भाग मात्र हैन, आत्मविश्वास पनि घटेको हुन्छ । तसर्थ उपचारमा संलग्न डाक्टर, मनोविद्सँगै परिवार र समाजले हौसला दिनुपर्छ ।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिको कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी शरीरको अन्य भाग कुरुप पारेमा, पीडा पु¥याएमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।